XFLR5: Dhizaina Ndege Dzako, Mapapiro uye Mhepo Mhepo | Linux Vakapindwa muropa
XFLR5 - Dhizaina mapapiro, profiles, uye airfoils
Isu tinogara tichipira zvinyorwa zvekutsanangura kana kupa zvipfupi tutorials pane software inoshandiswa nevashandisi vekumba zuva nezuva, asi isu takafungawo nezvazvo imwe nyanzvi software yaunogona kushanda nayo. Imwe yacho ndeye XFLR5, software yepamberi yekugadzirwa kwemapapiro enhandare, mafirimu emhepo, maprofiles uye airfoils.
XFLR5 isoftware Linux inoenderana, yemahara uye yakavhurwa sosi iyo inotibvumidza isu kuve nehunyanzvi chikuva kunoenderana neReynolds nhamba. Kubva kwavari zvichatibvumidza kuti tigadzire graphic yedu chinhu. Pamwe vamwe venyu vanonzwika sekunge ndiye anotsiva XFOIL, ese mapakeji echinangwa chimwe.
Purogiramu yakagadzirwa naMark Drela yeiyo Daedalus chirongwa paMIT (Massachusetts Institute of Technology) mumakore makumi masere, vachishandisa ma algorithms akafanana neXFOIL. Chaizvoizvo iri XFOIL iyo yakangodudzirwa mumutauro mutsva wechirongwa, pamwe nekusanganisa misiyano.
Kana iwe uchida kudzidza zvakawanda nezve ino curious chirongwa, iwe unogona kuwana izvi dzidzo muchiSpanish. Uye kana izvo zvaunoda kurodha pasi software kuti utange kushanda nayo, iwe unofanirwa kuenda kune iyo webhusaiti yepamutemo yeprojektiInorema zvishoma uye sezvaungaona zviri nyore asi zvinoshanda. Tariro mafeni eeronautics kana mafeni eerodynamics senge...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » XFLR5 - Dhizaina mapapiro, profiles, uye airfoils
Elementary OS Freya, chaiyo Mac yekuparadzira ikozvino yavapo